सैनिक विद्यालयमा बालकमाथि निर्घात कुटपिट – Rajdhani Daily
सैनिक विद्यालयमा बालकमाथि निर्घात कुटपिट
राधेश्याम खतिवडा / चितवन
चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा रहेको नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित महाविद्यालयको आवास क्षेत्रमा बसेका विद्यार्थीहरूले आफ्नै साथीलाई निर्घात कुटपिट गरेका छन् । साथी मारेपछि विद्यालय बिदा हुन्छ भन्ने सोचले आफ्नै साथीलाई रातको समयमा छात्रावासका विद्यार्थीले सामूहिक कुटपिट गरेका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिका–१० निवासी सिर्जना पौडेल लामिछानेका छोरा १४ वर्षीय श्रीनव लामिछानेलाई मार्ने उद्देश्यका साथ कुटपिट गरिएको हो । पीडित श्रीनवले भने, ‘कुट्नेले विद्यालय बन्द हुने र यहाँ बस्न नपर्ने भन्दै थिए ।’
उनको दायाँ आँखाको छेउमा गहिरो चोट लागेको छ भने आँखामुनिको हड्डी भाँचिएको छ । घाँटीमा हातले थिच्दा निलडाम परेको छ भने दुवै आँखामा रगत जमेको छ । गहिरो घाउका कारण नाक र मुखबाट समय–समयमा रगत बग्ने गरेको पीडित बालक श्रीनवले बताए । कुटपिटको जानकारी पाएपछि छोरालाई भरतपुरको मनकामना अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा सिटी स्क्यानसहित स्वास्थ्य परीक्षण गरेको र त्यसपछि प्रहरीमाउजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा लागेको सिर्जनाले बताइन् ।
यति ठूलो घटना हुँदासमेत विद्यालयले लुकाएकोमा आफूहरू दुःखी भएको पीडित परिवारले बताएका छन् । घटनापश्चात् बिहान १० बजेतिर विद्यालयका निमित्त प्रिन्सिपल भविलाल न्युरेले पीडित बालकका बुबा नवराज लामिछानेलाई टेलिफोन गरेका थिए । तर, उनले घटनाको विषयमा केही नबताएको लामिछानेले बताए ।
घटनाका विषयमा जानकारी लिन खोज्दा विद्यालयका निमित्त प्रिन्सिपल न्युरे सम्पर्कमा आएनन् । विद्यालय हेर्दै आएका मेजर प्रकाश अधिकारीले घटनाको बारेमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताए ।विद्यालयल प्रशासनले कुटपिटको घटना लुकाउन खोजेको पीडित बालकले बताए । उनले भने, ‘मलाई पिट्ने साथीका अभिभावक बोलाइएको थियो, मेरो ममीलाई खबर थिएन, पछि बाहना पारेर ममी मेरो बारेमा बुझ्न आउँदा स्कुलले जानकारी गराएको हो ।’
सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा रहेको विद्यालय भएका कारण नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले घटनामा संलग्न तीन जना विद्यार्थीलाई ‘सस्पेन्स’ गरिएको जानकारी दिए । ६ कक्षाभन्दा माथि मात्रै पढाइ हुने सो विद्यालयमा छात्रलाई अनिवार्य आवासमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने छात्रालाई घरबाटै आउने–जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘धारामा ठोक्काए, लडाए’
हामी मस्त निन्द्रामा थियौं । शनिबारको दिन बिहान ३ बजेको समयमा पिसाब फेर्न साथीसँग जाने गरिएको थियो । ९कक्षामा नयाँ भर्ना भएका क्रिस थापा सधैं मसँग पिसाब फेर्न जाने गरेका थिए । त्यस दिन पनि मलाई बोलाए । म बेडबाट उठें । क्रिस नै हो सोचें तर त्यसदिन अनिस श्रेष्ठ रहेछन् । अनिससँगै पिसाब फेर्न गएँ । शौचालयमा अनिस पिसाब गरिरहेका थिए । नजिकै अर्को साथी रियाज रेग्मी लुकेर बसेका रहेछन् । रियाज लुकेर बसेको देखेपछि म आत्तिएँ झस्याङ्ग भएँ ।
मैले किन लुकेको भनेर सोधें । लगतै रियाज रेग्मीले मलाई समाते, पछाडि क्रिस थापा पनि आएर समाते ।
दुई जना भएर घाटी न्याके, नाक र मुख छोपे भित्तामा ठोकाए । धारामा लगेर न्याके । आत्तिएर म कराएँ । त्यही समयमा पिसाब गर्न शौचालय पुगेका सुयोग श्रेष्ठ, रिजन श्रेष्ठ नजिकै आएका थिए । तर, क्रिस थापाले चुप लाग भनेर थर्काए । मेरो बेड पार्टनर सुयस खनालले म कराएको सुनेका रहेछन् । मेरो बेड पार्टनर भएकाले सुयसले मलाई भित्र खोजेछन् नदेखेपछि उनले पालेलाई भनेछन् । पालेलाई खबर गरेपछि क्रिस थापा डराए । त्यसपछि मलाई झन् धारामा ठोकाए, टुटी नै भाँचिएछ । त्यसपछि उनीहरू भागे । अनि म घिस्रिरहेको थिएँ पालेलाई भेटें ।
मरेपछि विद्यालय बन्द हुन्छ भनेर मलाई कुटेका अरे । आएदेखि नै विद्यालयमा कोही मरो भने के हुन्छ ? कसैलाई मार्दा के हुन्छ ? जस्ता कुरा सोधिरहन्थे तिनीहरूले । सबै ९ कक्षा पढ्ने हुन् । विद्यालयमा क्रिस थापा नयाँ विद्यार्थी हुन् । अरू पुराना विद्यार्थी हुन् । मलाई ३ बजेर ४५ मिनेटमा उपचार गर्न लगे । नजिकै रहेको एउटा क्लिनिकमा उपचार गराएर ल्याए ।
घटनापछि तीन जना साथीको अभिभावक (प्यारेन्ट्स) सँग कुरा भयो । मेरो प्यारेन्ट्सलाई बोलाउने भनेको विद्यालयले बोलाएन । मेरो साथीको बाबाले ममीलाई भनेपछि बहाना पारेर मम्मी विद्यालय आउनुभयो । पछि मात्र ममीलाई सामान्य चोट लागेको भनेर विद्यायले जानकारी गराएको हो ।
विप्लवविरुद्ध संगठित अपराध मुद्धा